जलविद्युतमा उछाल आउँदा कारोबार रकम कति ? - Janakpur News
Janakpur News Trending News Portal of Nepal
पूर्वी युक्रेनमा हिंसा रोकिएन
दलित–सुकुमबासी बस्तीमा मधेश मानव अधिकार (मधुर)को राहत
पत्रकार महासङ्घ: मतदान सम्पन्न
यातायात कम्पनी संस्था ऐनअनुसार दर्ता नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन प्रस्तावमाथिको दफाबार छलफल सम्पन्न
भारतलाई बाँध भत्काउ प्रमुख दलका नेतालाई थापाको आह्वान
सिरहाको अति बाढी प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क घुम्ती स्वास्थ्य शिविर
एनसेलद्वारा १ करोड ६६ लाख निःशुल्क एसएमएस
विराटनगर विमानस्थलको लेदो हटाउन खटियो नेपाली सेना
दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति मुन जाय इनले उत्तर कोरियासँग वार्ताको प्रस्ताव
Home / अर्थ / बाणिज्य / जलविद्युतमा उछाल आउँदा कारोबार रकम कति ?
जलविद्युतमा उछाल आउँदा कारोबार रकम कति ?
Newsjanakpur May 9, 2017	अर्थ / बाणिज्य, ओनलाईन पत्रिका Leaveacomment 86 Views
काठमाडौं, वैशाख २५ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार मापक नेप्से १३ दशमलव ५१ अंकले बढेर १६ सय ५० दशमलव ८१ को बिन्दुमा पुगेको छ ।
मंगलबारको कारोबार जलविद्युत् समूहमा उछालनै आएको छ । यो समूह सबैभन्दा बढी ५ दशलवम ८८ प्रतिशत अर्थात १ सय १५ दशमलव ९६ अंकले बढेको छ । आज सर्वाधिक कमाउनेमा यहि समूह अन्र्तगतका कम्पनीहरु पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुन सफल भएका छन् । क्रमशः अपि पावर कम्पनी वुटवल पावर कम्पनी र सानिमा माई हइड्रो पावरले यी स्थान ओगट्न सफल भएका छन् । तीन ओटै कम्पनीहरुको शेयरमूल्य करिव ९ प्रतिशतले बढेका छन् । भने कमाईको आधारमा दोस्रो बनेको सानिमा माई हइड्रो पावर यता कारोबारमा भने पहिलो हुन सफल भएको छ । यस कम्पनीको आज ४ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
त्यस्तै बीमा समूह ६६ दशमलव ०१ अंक, विकास बैंक समूह २५ दशमलव ०६ अंक, होटल समूह २२ दशमलव ३६, बैंकिङ समूह ७ दशमलव ०२ अंक, फाइनान्स समूह ४ दशमलव ४४ अंक र अन्य समूह १ दशमलव ४५ अंकले बढेका छन् । फाइनान्स समूहअन्र्तगत पर्ने सिनर्जि फाइनान्सका लगानीकर्ताहरुले सवैभन्दा धेरै ३ दशालव ६३ अंकको घाटा व्यहोर्न परेको छ ।
सेन्सेटिभ इन्डेक्स पनि २ दशमलव ७८ अंकले बढेर ३५२ दशमलव ५४ को बिन्दुमा पुगेको छ । मंगलबार १४२ कम्पनीको ६१ करोड २० लाख १८ हजार ४९७ रुपैयाँको १० लाख ७१३ कित्ता शेयर किनबेच भएका छन् ।
पछिल्ला केही दिनयता लगानीकर्ता शेयर बजार भन्दा पनि राजनीतिक घटनाक्रम केन्द्रित हुँदा बजारले गति लिन सकेको थिए । चुनाव आउन ५ दिनमात्रै बाँकी रहँदा मंगलबार बजार दोहोरो अंकले उकालो लागेको छ । यद्यपी कारोबार रकम भने परिसूचक वृद्धिअनुसार बढ्न सकेको छैन ।
Previous स्वावलम्बन लघुवित्तको मुनाफामा सामान्य वृद्धि
Next मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको नाफामा ७५ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौँ, ५ भदौ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले यातायात …
अर्थ / बाणिज्य (145)
ओनलाईन पत्रिका (332)
बिचित्र संसार (19)
सूचना / प्रबिधि (1)
ताजा भीडीयो समाचार
उम्मेद्वारी दर्ता गर्न गएका व्यक्तिले आफ्नो नाम मृतकको सूचीमा पाए -NEWS 24
BUSINESS FORUM (2074/3/6)-NEWS 24
एउटा साहसी अल्लारेको अन्त्यले सबैलाई बनायो स्तब्ध-NEWS 24
BUSINESS TODAY (2074/3/5)-NEWS 24
होटल,रेष्टुराहरुको ब्रम्हलुट,यसरी ठगिन्छन् उपभोक्ता ? एक खास खुलासा – POWER NEWS
उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ताका लागि झापा सम्पूर्ण तयारी पूरा – NEWS24 TV
खेलकुद अस्पताल बन्दै-SPORTS LINK
भूकम्पले क्षति पु¥याएका धरोहरको पुनर्निर्माण कार्य धमाधम – NEWS24 TV
काठमाडौंको विभिन्नस्थानका आकाशे पुल जिर्ण बन्दै – NEWS24 TV
Aama with Raja Rajendra_2074_03_03 – AAMA
तस्बिर मा खबर
Janakapur News in English
© Copyright Janakpur News 2017, All Rights Reserved